mhando 0.7.6 – Rambai rinopfungaira
Nyamavhuvhu 3, 2011 kubudikidza chipo 43 Comments
Tinofara anokuisai vose zvedu Newest Wordpress plugin kusunungurwa. Ichi rinopfungaira kusunungurwa kuti hachisanganisiri kuchinja zvikuru kana pane chiri zvakare groundbreaking. Saka tikangogara kufamba pamusoro changelog uye tsanangura nhau.
Hatina kupinza zvimwe kuvandudzika kune nyore HTML domów iyo inoshanda se mujinga kuti parser yedu kubva idzva nechokumusoro kwerwizi kusunungurwa, kwete nhau zvikuru pano
Bvumira marongero ari mutauro mumhanyi / peji ane nyore kufanosarudza bhokisi. Iyi haisi nyaya itsva, sezvo izvi angadai akagadziriswa kare kuwedzera wangu tp_language Meta kumapango manually, Zvisinei zvine nyore muitiro, uye zvakare nechokwadi chokuti kududzira mutauro default dzikava pamusoro kuitira kuti dzinoti achagara kushanda.
Kunyevera pamusoro zvimwe zvinhu kuti hatigoni kugadzirisa uye rokushandisa vanofanira zvimwe kungwarira. Pari pane ezvinhu maviri isu wazivisa pamusoro, izvo ndivo vakaita zvakawanda redu kutsigira mibvunzo zvevakomana. Chokutanga tinofanira kuyambira pamusoro yakaderera ndangariro mamiriro, uye tinokurudzira vanhu kuti vawedzere PHP kurangarirwa kwavo muganhu (kana kuti chinja kuti pachine Hosting basa). Nyevero wechipiri pamusoro kushaya APC kana zvakafanana zvinogona kuvandudza chokupika zvinoshamisa (zvakare, chinja kuna nani Hosting!). Nyevero zvinogona zvakanaka kubviswa nokutsikirira duku X chiratidzo uye parutivi iyo kucharatidza kuti murege kuona nyevero idzodzo munguva yemberi iri pedyo.
Bvumira yakaungana anonymized statisics pamusoro mushandisi mvumo. Ndapota ndapota achititadzisa kuunganidza vamwe mashoko! Tinonyatsoda zvimwe maturo Nhamba akafanana tiri wakamhanyira 1 zillion nzvimbo uye vari kushandura rimwe gazillion mapeji por wechipiri!
Fixed zvimwe zviziviso yambiro kuduku kushumwa ne vanoshandisa. Hachizoiti matanda ako tsinga pashure achibvisa ma ads dzedu!
Hatina zvakare mabhuku FAQ peji, pamwe tichadzivisa mimwe mibvunzo kudzokorora, kana isu Podràs kuudza vanoshandisa kuverenga FAQs kuti…
wo – zviri ikozvino nyore pane kare kuratidza rutsigiro rwenyu husingaperi basa iri achishandisa evanhu mabhatani kurutivi, haina mari iwe chinhu (pamwe kunze neshamwari dzako dzose, mukurumbira uye nokubwinya on Facebook) saka chete kuzviita!
Tinovimba kuti iwe uchanakidzwawo shanduro iyi, uye dai (semazuva ose) kufara kuverenga kwako mhinduro.
Ina Under: Release zviziviso Tagged With: 0.7, kuduku, rusununguko